थरुहट आन्दोलन घोषणा • Anumodan National Daily
थरुहट आन्दोलन घोषणा
घटनामा संलग्न भएकाे अभियाेगमा थुनिएकालार्इ क्षतिपूर्ति सहित रिहा गर्न माग
प्रकाशित मिति : 4th December 2018
धनगढी । थारु कलयाणकारिणी सभा कैलालीले टीकापुर घटनालाई लिएर थरुहट आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
सभाले मंगलबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी टीकापुर घटना गराएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको घटनालाई लिएर दुई महिने संघर्षको कार्यक्रमम घोषणा गरेको हो । थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण चौधरीले टीकापुर घटनाको सुनुवाई छिटो गरी न्याय दिन माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको बताए । उनले सरकार र अदालतले घटनाको सुनुवाई विभिन्न बहानामा पछि सार्दै निर्दोषमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए ।
सभाले टीकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलनका कारण भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रुपमा सरकारले समाधान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका चौधरीले कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई सरकारले तत्काल प्रमाण पत्र दिई सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले सांसद् निर्वाचित भएका चौधरी सहित थुनामा राखेका सबै २७ जनालाई रिहा गर्नुपर्ने बताए ।
सभाका कैलाली जिल्ला कार्यबाहक सभापति माधव चौधरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई क्षतिपूर्ति सहित रिहाई गर्न, थरुहट संषर्घ समितिले उठान गरेको पहिचान सहितको अधिकार सम्पन्न प्रदेशको सिमांकन गर्न र थरुहट आन्दोलन सम्बन्धी मुद्दा छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिस गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा मंसिर २३ गते मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, मंसिर २४ गतेदेखि राजनीति दलका प्रतिनिधि, बरघर, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, युवा र महिलाहरुसंग जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया गरिने उल्लेख छ । टीकापुरबाट शुरु हुने अन्तरक्रिया टीकापुरमै बृहत सभासहित सम्पन्न गरिने कार्यबाहक सभापति चौधरीले बताए । उनले सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र नीधि, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो लगायतले सभालाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
यत्ति गर्दा पनि टीकापुर घटनाको सुनुवाई नभएमा अनिश्चितकालीन धर्ना र सडक आन्दोलनको विकल्पमा जाने केन्द्रीय सदस्य चौधरीले बताए । उनले सांसद निर्वाचित चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाण पत्र नदिदा समग्र पहिचानवादी जनतालाई अन्याय भएको महसुस भएको बताए ।
सभा पूर्वसभापति प्रभातकुमार चौधरीले २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटना आन्दोलनकारी र राज्यबीच भएपनि भदौ ८ गते टीकापुरमा जातीय सद्भाव विथोल्ने घटना भएको बताए । उनले ८ गतेको घटनामा संलग्नलाई सरकारले छुट्कारा दिएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे ।
नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वसभापति चौधरी जिल्ला अदालतले सक्कल मिसिल सर्वोच्चमा पठाएर जिल्लामा सुनुवाई हुन नसकेको जनाएको बताए । उनले ति मिसिलहरु तत्काल जिल्लामा झिकाएर सुनुवाई गरी मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा व्यवख्या गर्दै राजनीतिक रुपमा समाधान गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।